निर्मला हत्या प्रकरणः जसले जिउँदै आफ्नो श्रद्धान्जलीको खबर पढे ! – Everest Dainik – News from Nepal
निर्मला हत्या प्रकरणः जसले जिउँदै आफ्नो श्रद्धान्जलीको खबर पढे !
कञ्चनपुर, असोज १९ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका वास्तविक दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने माग गर्दै चर्केको आन्दोलनमा भदौ ८ गते प्रहरीको गोली लागेर १ जनाको मृत्यु भयो ।
सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा मृत्यु हुनेको नाम चेतन भट्ट भनेर आयो । धेरैले आफ्नो फेसबुकवालमा उनको तस्बिर राखेर श्रद्धाञ्जली दिँदै ‘अलबिदा चेतन’ पनि भन्न भ्याए ।
महेन्द्रनगरकै भृकुटी उच्चमाविका कक्षा ८ का विद्यार्थी चेतन निर्मलालाई राम्ररी चिन्थे । त्यसैले उनी सुरुदेखि आन्दोलनमा संलग्न थिए । भदौ ८ गते उनी महेन्द्रनगर बसपार्कको पूर्वपट्टी प्रदर्शनमा थिए । उनीसँगै पढ्ने २०-२५ जना विद्यार्थी पनि थिए । त्यहीबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खटिएका प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सनी खुना लगायतका व्यक्तिहरु घाइते भएका थिए । गोली चलेपछि भीड तितरवितर भयो ।
‘मलाई मेरो कान्छो बुबाले फेसबुक देखाउनुभयो- तेरो मृत्युको खबर यसरी आइरहेको छ भनेर,’ उनले भने । भोलिपल्ट केही पत्रपत्रिकामा समेत चेतनकै नाम छापिएको थियो । फोटो भने सनी खुनाको थियो । अर्को दिन उक्त खबर सच्याएर आएको चेतन सम्झिन्छन् ।
चेतनलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भित्रबाट चलाएको गोली लागेको हो । त्यस दिन मृत्यु भएका सनी खुनालगायतलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकैबाट चलाएको गोली लागेको उनले बताए । चेतनका बुबा पदमराज भट्ट निर्माण व्यवसायी हुन् । आमा पुनम गृहिणी । उनी प्राय बिरामी भइरहन्छिन् ।
धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा ५ दिन उपचारपछि चेतनलाई काठमाडौं लगियो । काठमाडौं शिक्षण अस्पतालमा पनि उनले ४ दिन उपचार गराए । अहिले उनको बायाँ पाखुरामा गोलीका छर्रा छन् ।
शिक्षण अस्पतालमा सुरुमा राम्रो उपचार भए पनि अहिले फलोअपमा जाँदा लापरबाही हुने गरेको उनले बताए । पाखुरामा रहेका छर्रा निकाल्न डाक्टरले अप्रेशन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्योहोर्ने भने पनि स्थानीय प्रशासनले फलोअपमा जाँदा लाग्ने टिकट तथा उपचार खर्च दिन नमानेको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
ट्याग्स: Chetan bhatta, kanchanpur, Nirmala Pant